Mamono ny voay, miravaka ny vanginy | NewsMada
Mamono ny voay, miravaka ny vanginy
Fararano tokoa isika ! Miaka-bokatra ny mpamboly vary, faly amin’ny ankapobeny satria tsara ny vokatra. Tsy noho ny nataon’ny fanjakana, tsy nanampy vola hikarakarana ny tanimbary, ny nampitombo ny vokatra, fa noho ny toetr’andro voajanahary : betsaka ny orana, teo ny hafanana, fepetra mahatsara ny vokatra, miampy ny ezaky ny mpamboly tsirairay nikojakoja nampiasa masomboly voafantina, nanisy zezika ary nanondraka fanafody raha sendra mety ho simba ny voly. Manararaotra izany, misalovana manao “santa-bary” ny mpitondra manambara fa hitondra fampandrosoana ny hatsaran’ny voka-bary, nefa haingana koa rehefa « hiala olana » ka tsy andraikitry ny fanjakana ny mametra ny vidim-bary rehefa midangana, milaza fa « malalaka ny tsena ». Ny tantsaha ny « namono ny voay », nahatsara ny vokatra ; ny fitondrana, mitady « hiravaka ny vanginy », milaza fa miasa ny fanjakana.
Etsy ankilany, tsy vitsy amin’ireo mitonona manohitra ny fitondrana ny manararaotra ny hetsiky ny solombavambahoaka 73. Vao nahazo olona maro izy ireo ny 21 avrily teo, ireny fa mipoitra daholo izao “very seza” tamin’ny “Tetezamita” izao, mpitarika antoko aman-jatony, tsy nahazo mihoatra ny 4% tamin’ny fifidianana nifandimby, milaza fa manohana ny hetsika. Hatramin’izay, naneho hevitra izy ireny, nitarika olona (fa tsy nahazo) nandritra ny fitondran-dRajaonarimampianina, tao anatin’ny efa-taona, fa tsy nahavita. Ahitana ireo “mamba noana politika”, “notendrena fa tsy olom-boafidy » toy ny CT, ny CST, ny minisitra, ny talen’ny fitantanana minisitera, ny tompon’andraikitra ambony, ny mpitarika antoko, fikambanana, eny hatramin’ny fikambanam-piavahana mihitsy aza. Miseho etsy sy eroa, an-gazety, haino aman-jery, satria mba mahay mandaha-teny, nefa “lasan-ko vavany fotsiny…”, fa tsy hita ny asa vita.
Tsotra ny tiana hahatongavana, soa fa fararano, mba sitrany ahay zakan’ny maro anisa ny vidim-bary (foto-tsakafo) eto an-toerana, latsaky no ho ny vidin’ny “stock”, ka mba misy ny harapaka. “Mamba noana, toy ilay liona mitady izay harapany” koa ireo milaza fa “matihanina” amin’ny fanaovana politika. Sa “maty an-kanina” tokoa ka “zara aza teo ny solombavambahoaka 73 mamono ny voay” ka te hiravaka ny vanginy ireo “noana lava amin’ny politika”. Sao sitrany ahay mahazo toerana tale kabinetra na tale jeneraly na lehibe sampandraharam-panjakana amin’ity governemanta vaovao hijoro ity. Izany tokoa no tena “maty an-kanina” amin’ny politika.